महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर भत्काइयो – Patrika Nepal
साउन २१, २०७८ बिहिबार 136
पत्रिका नेपाल – महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मैतीदेवीमा रहेको घर संग्रहालय बनाउने प्रयोजनका लागि भत्काउन सुरु गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका ३० मैतीदेवीस्थित रहेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घर सरकारले किनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले संग्रहालय बनाउन लागेको हो।
संग्रहालय बनाउनका निम्ति देवकोटाको सो घर भत्काइएको छ। महाकवि देवकोटाकी छोरी अम्बिकादेवी रिमालले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राम्रो काम गर्नकै लागि घर भत्काएको होला भन्ने विश्वास रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘एकेडेमीमा सबै बुद्धिजिवी व्यक्तिहरु बस्नुहुन्छ । सबै पढेलेखेको बुद्धिजिवी व्यक्तिहरु बस्नुहुन्छ । उहाँहरुको तजबिजले राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छु । उहाँहरु जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ’. उनले भनिन्।
महाकवि देवकोटाको घर सरकारले २ करोड ५० लाखमा किनेको हो । देवकोटाले सो घर वि.सं. १९९० सालतिर किनेको बताइएको छ । १२ आना क्षेत्रफलमा ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लागतमा सरकारले चारतल्ले संग्रहालय बनाउने भएको छ।
‘‘सङ्ग्रहालय परिसरको अग्रभागमा देवकोटाको पूर्ण कदको सालिक रहने छ। कवि गोष्ठी गर्न र नाटक मञ्चन गर्ने मिल्ने गरी एउटा डबलीसमेत निर्माण गरिने जनाइएको छ। प्रतीक्षालय र श्रव्यदृश्य कक्षसमेत निर्माण गरिने सो परिसरमा सुन्दर बगैँचासमेत बन्ने छ।
Prevमनाङ र मुस्ताङका सबै नागरिकले कसरी पाए कोरोना खोप ?
Nextपारसलाई प्रधानमन्त्री देउवाको शुभकामना- जिन्दगीको दोस्रो इनिङमा पनि सफलता मिलोस्